true conflicts /zu-ZA/tools-for-life/conflicts/steps/the-solution-to-conflicts.html practical 4 4 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/conflicts_zu_ZA.jpg Ungazixazulula Kanjani Izingxabano
Sebenzisa uhla lwemibuzo oluhlelwe kusiqephu “Ungalithola Kanjani i-Third Party” ukusombulula ingxabano phakathi kwabantu ababili ngokwenza okulandelayo:
1. Thola umuntu, abantu ababili abashadile noma iqembu elinengxabano engasombululeki.
2. Wena xoxisana nabantu abathintekayo bese uthola izimpendulo zabo emibuzweni esohlwini lwesiqephu “Ungalithola Kanjani i-Third Party.” Thatha amanothi bese wenza uhlu lwawo wonke amagama abakunika wona.
3. Lapho usuqedile ukwenza izingxoxo futhi uqinisekile ukuthi uzitholile zonke izimpendulo zemibuzo yakho, bala inani lezikhathi igama ngalinye livela ohlwini olwenzile.
4. Batshele bobabili labo bantu obukade uxoxisana nabo ngegama lomuntu owavela izikhathi eziningi epheshaneni lakho. Tshela lowo umuntu noma ababili abashadile noma iqembu ukuthi ngubani i-Third Party. Uma ingxabano ixazululeka, lokho ukuphela kwayo.
5. Uma ingxabano ingapheli futhi ilokhu ikhona phakathi kwabantu abathintekayo, phinda lezi zinyathelo ezingenhla uze ubone okunguyena i-Third Party lapho ingxabano ixazululekile.